Multilingual Bible: Xhosa, Psalms 128
Xhosa, IiNdumiso 128 (Psalms 128)
1 Ingoma yezinyuko. Hayi, uyolo lwabantu bonke abamoyikayo uYehova, Abahamba ngeendlela zakhe!
2 Ukuxelenga kwezandla zakho inene uya kukudla, Uya kuba noyolo wena, kulunge kuwe.
3 Umkakho woba njengomdiliya oqhamayo Endlwini yakho ngaphakathi; Oonyana bakho babe njengezithole zomnquma Ngeenxa zonke esithebeni sakho.
4 Yabona, unjalo ukusikelelwa umfo Omoyikayo uYehova.
5 Makakusikelele uYehova eZiyon. Uyibone iYerusalem inenyhweba Yonke imihla yobomi bakho;
6 Ubone abantwana babantwana bakho. Malube luxolo kuSirayeli.
(Psalms 127) Choose Book & Chapter IiNdumiso 129